Android Wear 2.0: kugadzirisa kunokwikwidza zvakananga neApple Watch | Ndinobva mac
Android Wear 2.0: kugadzirisa kunokwikwidza zvakananga neApple Watch
Kubva nhasi, Kukadzi 9, 2017, Android Wear inogadziridzwa zviri pamutemo kushanduro 2.0, kubatanidza akateedzana eakakosha maitiro ayo anotendera, ikozvino, ayo anotarisa ne Android Wear uve imwe nzira chaiyo kune Apple Watch.
Parizvino, isu tanga taona sekuwanda kwemabasa emawatch ane Android Wear, ivo vaigumira maererano nemabasa kana vaibatanidzwa ne iPhone. Kubva ikozvino, nekuda kweiyo nyowani nyowani, Apple Watch ine mamwe makwikwi.
Chinhu chekutanga kutaura kuti kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchiona smart smart iyo isiri yeiyo Cupertino vakomana, Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti wachi yaive yakaganhurirwa kungozivisa chete paruoko rwako, asi zvimwe zvishoma.
Nechirevo chitsva, inozopedzisira yabvumidzwa kuve nema-non-native application pawrist yako, chimwe chinhu chinotarisirwa kwazvo. Iye zvino, chechitatu-bato kunyorera kunogona kukudziridza kuve neapps pane yedu ruoko (chimwe chinhu icho Apple Watch yatove kuita) Kunze kwezvo, iyo kugadziridza kwekugadzirisa kwakakwana, kusanganisira zvakare keyboard uye / kana kunyora kukwanisa kupindura mameseji zvakananga kubva pawachi pachayo. Iyo iMessage application yaisazobatanidzwa pano.
Izvo zvinosara kuti zvionekwe kana tichigona kubhadhara newachi pachayo tichishandisa, ehe, Android Pay (Apple Pay haizovepo nesarudzo yaApple.)
Mawadhi ayo achave nemukana wekuvandudza havasi vese. Parizvino, LG yakaburitsa maviri ekutanga mamodeli ayo anouya nekumisikidza neiyi nyowani OS (LG Yekutarisa Style uye LG Kuona Sport). Kunze kweizvi, inotevera runyorwa inoratidza zvishandiso zvinozovandudzwa kune iyo nyowani yekushandisa system:
LG Kurinda Urbane
LG Tarisa Urbane LTE
Huawei Tarisa Vakadzi
Casio Smart Kunze Kwekutarisa WSD-F10
Tag Heuer Yakabatanidzwa
Zvisaririra Q Kudzungaira
Zvakasarudzika Q Marshal
Fossil Q Muvambi
Michael Kors Kuwana Dylan Smartwatch
Midziyo senge LG G Tarisa chizvarwa chekutanga, Moto 1 360st chizvarwa, uye Sony Smartwatch 1. Android anoda neichi kuti ave mukwikwidzi chaiye mumusika we «Tarisa», chimwe chinhu icho mu2016 chaasina kuwana chaizvo, senge takaona nguva pfupi yadarika ndiri kubva kuMac.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti izvi zvidzoreso, kunyangwe zvikaitwa zviri pamutemo nhasi, Ivo havazove vachiwanikwa kusvika Kukadzi 15, iro zuva ravachatanga kugoneswa mumaawa aripo. Uye zvakare, maviri matsva mawadhi e Google, iyo ichaunzwa pamberi pekupera kwekota yekutanga yegore, ichauya nehurongwa hutsva hwakabatanidzwa.
Iyi yekuvandudza unogona kufungidzira mugore ra2017 makwikwi chaiwo kuApple Watch, iyo kusvika zvino yaona kusakwikwidzana kwayo kukuru nekutadza kuwana ivhu, nekuda kwekukanganisa kuripo. Tichaona kuti iyi nyowani nyowani inobata sei mumwedzi inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Android Wear 2.0: kugadzirisa kunokwikwidza zvakananga neApple Watch
Apple Bhadhara muUnited States inoramba ichiwedzera huwandu hwemabhangi anotsigirwa uye masangano echikwereti
Apple Pay inodarika PayPal uye inova inonyanya kushandiswa nhare yekubhadhara nhare muUS